Amathiphu Ukuze Riding With Kids On Isitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amathiphu Ukuze Riding With Kids On Isitimela
(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/12/2019)
Imikhaya enezingane izingane, Ukugibela nezingane esitimeleni kungaba kokubili okuthakazelisayo futhi indlela ezingabizi ukuhamba. Futhi mhlawumbe ukhululekile kakhulu futhi okungenani ezicindezelayo lapho uhambela nezingane. Thina yazi ukuhamba nezingane is edangalisayo kungakhathaliseki ukuthi iyini zokuthutha indlela, ngakho uma Riding nezingane esitimeleni. Nanka amanye amathiphu!
Imikhaya iyothola ufuna ukuya esiteshini ekuseni eyolanda amathikithi futhi uthole izihlalo ezinhle ndawonye esitimeleni. Uma ungazange agodliwe izihlalo, izihlalo ayatholakala kwi lokuqala eze, first served basis, ngakho musa babhajwe esimweni lapho kuyobe kungaphandle.
Cabanga ubuthongo uma Riding nezingane esitimeleni.
Ukugibela nezingane ku uhambo isitimela kuvumelana isikhathi ingane yakho isihlwathi, ngakho qiniseka ukuthi uzilungiselele. Uyiduduze izinto efana umcamelo noma blankie ozithandayo.
Lyon ukuba Izitimela Nice
Paris Izitimela Nice
Avignon ukuze Izitimela Nice
EMarseilles ukuze Izitimela Nice
Into ebaluleke kakhulu ingxenye ukuhlela yakho okwesikhathi uhambo ngesitimela (ikakhulukazi uma isikhathi eside) kufanele kube ukuthi uya ukugcina izingane ubungazwa.
Kuvele choice esobala abazali abaningi kungaba ukuthenga amathoyizi ambalwa noma alethe izintandokazi zabo ekhaya. PAint izipikili amantombazane ', ukufunda izincwadi, ukudlala Uno, ukuletha umbala ezincwadini, ulalele audiobooks.
Esinye ithiphu enkulu for Riding with kids on a train is to download amabhayisikobho kumadivayisi akho uma usekhaya futhi nokufinyelela WiFi.
Bangu no car seat requirements or fasten seat belt signs, ngakho izingane ukuhambahamba isitimela njengoba ubona kufanelekile! Ukuhlola izitimela nezingane kuyindlela enhle izigcine zenza okuthile.
Ayikho into ebuhlungu ukwedlula kokuba bathathe uhambo futhi kokuba ngathiyeka nganoma iyiphi indlela nge izingubo zakho. Gqoka induduzo! Sincoma esiwuhogelayo, izingubo stretchy futhi Izicathulo ukuze ujabulele umuzwa wakho esitimeleni. nabagibeli abanolwazi batusa beletha ukunethezeka eziyingcosana ekhaya kakhulu, kuhle kwengubo yokulala noma throw umcamelo.
Zonke lokho kwesokunxele ukwenze asonge, uphumule futhi ujabulele Riding nezingane phezu isitimela isipiliyoni. Kungenxa yokuthi lapho uwuthola kukhona ingxenye fun!
Sazise nge tweeting nathi nganoma @SaveATrain! , Ungathola ezinye iziteshi zethu zenhlalo phansi Saveatrain
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Friding-with-kids-on-a-train%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
europeantravel izingane longtrainjourneys trainmovies amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi Travelingtips Travelingwithkids Travelingwithkidstips traveltips
Quick Guide: Okuhambayo ngu zemininingwane Kusukela Paris Ukuze Nice
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Indlela engcono kakhulu yokuhamba usuka e-Amsterdam eya eBerlin ngesitimela
Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Izikhangibavakashi Europe